ईमेल मार्केटिंग र ईन्टरनेट सेवा प्रदायकको डरलाग्दो रहस्य Martech Zone
ईमेल मार्केटिंग र ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको डरलाग्दो रहस्य
बिहीबार, नोभेम्बर ०,, २०२० बुधबार, सेप्टेम्बर 4, 2013 Douglas Karr
ईमेल उद्योगमा एक गन्दा रहस्य छ। यो कोठामा हात्ती हो जसको बारेमा कसैले कुरा गर्दैन। कोही पनि हैन गर्न सक्छन् यसको बारेमा कुरा गर्नुहोस् ती व्यक्तिहरु द्वारा दण्डको डरका लागि जुन हाम्रो इनबक्सलाई पालिस गर्दै छन्।
स्प्याम पर्मेसन गर्न केहि पनि छैन
त्यो सहि छ। तपाईंले यहाँ सुन्नुभयो। म यसलाई दोहोर्याउनेछु ...
तर डग ... तपाई के भन्दै हुनुहुन्छ? त्यो भयानक छ! यसले सम्पूर्ण उद्योगले हामीलाई बताउँदछ। यो के defies आईएसपीहरू हामीलाई भन्नुहोस्। यो के defies ESPs हामीलाई भन्नुहोस्। यसले स्प्यामको बारेमा हामीलाई के थाहा गर्दछ भन्ने कुरालाई पनि परिभाषित गर्दछ।
सत्य यो हो कि स्पाम हो छैन अनावश्यक ईमेल। स्प्याम हो छैन अनुमति बिना पठाइएको ईमेल। के स्प्याम is is अवांछित ईमेल अनावश्यक
आज, म GOODMSG भनिने सम्मानित स्रोतबाट ईमेलको लागि साइन अप गर्न सक्छु। म तिनीहरूलाई मेरो प्रदान गर्दछु अनुमति मलाई जहिले जहिले इच्छा ईमेल पठाउन, राम्रो प्रिन्टमा अनुमति दिएर मलाई कम्पनीहरूको तर्फबाट प्रस्तावहरू पठाउन उनीहरू 'व्यापार गर्दछन्'।
GOODMSG प्रत्येक ईमेल मा तिनीहरूको कम्पनी ठेगाना प्रदान गर्दछ।
GOODMSG सँग एक प्रतिक्रिया लुप सेटअप छ जसले स्वचालित रूपमा अनावश्यक सदस्यता खारेज गर्दछ।
GOODMSG स्पष्ट रूपमा एक सदस्यता रद्द लिंक प्रदर्शन गर्दछ।
GOODMSG रिभर्स DNS लुकअप सक्षम गर्दछ।
GOODMSG हरेक ईन्टरनेट सेवा प्रदायक (कि प्रस्ताव) को साथ ह्वाइटलिस्ट हुन लागू हुन्छ।
GOODMSG ISPs सँग सञ्चार कायम राख्न छुटकारा परामर्शदाताहरूको सूची बनाउँछ।
म पछि6महिना ईमेलको, म मेरो ISP को जंक ईमेल बटन क्लिक गर्दछु जब GOODMSG ले लंगडा प्रस्ताव पठाउँदछ। अन्य ग्राहकहरूले पनि त्यस्तै गर्छन्।
GOODMSG, सम्मानित विज्ञापनदाता, केवल एक स्प्यामर बन्नुभयो। अनुमति-आधारित, डबल-अप्टिन, CAN-SPAM अनुरूप, १-क्लिक सदस्यता रद्द गर्नुहोस् ... उनीहरूले सबै ठीकठाक गरे, तर अब तिनीहरू स्प्यामर हुन्।
एक स्प्यामरको रूपमा, तिनीहरू कालोसूचीमा छन्। तिनीहरूको आईपी ठेगाना अब ब्लक गरिएको छ। तिनीहरूका अन्य ग्राहकहरू जसले चाहनुहुन्छ ईमेलले प्राप्त गर्दैन। तिनीहरूको प्रतिष्ठा बर्बाद छ। हुनसक्छ तिनीहरू नयाँ ESP मा स्विच गर्छन्। हुनसक्छ तिनीहरू नयाँ आईपी ठेगानामा स्विच गर्छन्। तिनीहरूले केहि गर्नुपर्दछ, किनकि तिनीहरूको ईमेलले इनबक्समा यसले गर्न सक्दैन। हुनसक्छ ती व्यावासाय बाहिर जान्छन्। तिनीहरूको अपराध? एक कमजोर, अनावश्यक, सन्देश।
यसको लागि कसलाई जिम्मेवार छ? GOODMSG? ग्राहक?
कसलाई दोष लगाउने भनेको इन्टर्नेट सेवा प्रदायक हो, विशेष गरी, कुञ्जी ईमेल एजेन्ट-आईएसपीहरू प्रदान गर्ने - याहू !, गुगल, लाइभ (हटमेल, एमएसएन), एओएल। तिनीहरू दोषी छन् किनकि तिनीहरू हामीलाई वास्तविक स्प्याम बिरूद्ध रक्षा गर्न असफल भएका छन्। तिनीहरू त्रुटिपूर्ण प्रतिष्ठा प्रणालीहरूको उपयोग गर्छन्, तिनीहरू डाटा साझेदारी गर्दैनन्, सम्मानित स्रोतहरूको लागि राम्रो उपकरणहरू बन्नको लागि उनीहरू उपकरणहरू प्रदान गर्दैनन्। यसको सट्टामा, तिनीहरू वास्तविक स्पामर्सद्वारा पठाइएका अरबौं र अरबौं ईमेलहरू वेवास्ता गर्छन् जसले नियमहरू अनुसरण गर्दैनन्, प्रतिष्ठाको ख्याल गर्दैनन्, अनुमतिको ख्याल राख्दैनन्, उनीहरूको आईपी ठेगानाहरू चक्र गर्दछन् र ती सबै चेक र ब्यालेन्सहरू बाइपास गर्छन्। सम्मानित मार्केटरहरूको उपयोग।
यो धेरै स्थानीय हाईस्कूलमा ड्रग रहित साइन जस्ता धेरै हो। केवल व्यक्तिहरू जुन ड्रग-फ्री हुन् तिनीहरू त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो पहिले नै ड्रग-फ्री थिए। ड्रग डिलर अझैसम्म फुटपाथ र हलवेमा हिंड्छन्, संकेतहरू तिनीहरू मार्फत पास गर्दा तिनीहरू हाँस्दै।
मैले पहिले अनुमतिको बारेमा कुरा गरें। अनुमति संग समस्या यो छ कि ISPs को लागी कुनै प्रणाली छैन तपाईले अनुमति प्रदान गर्नुभयो भनेर सुनिश्चित गर्न। ESPs लाई यसको बिरूद्ध एक स्टप-ग्यापको रूपमा अनुमति चाहिन्छ जोखिम खराब वितरण र जंक ईमेल रिपोर्टि। को। जे होस्, ISP र ESP NEVER कहिले पनि अनुमति प्रक्रिया साझा।
कसैलाई किन भनेर सोध्नु पर्छ। कसैलाई अरबौं स्प्याम सन्देशहरूको जवाफ दिन आवश्यक पर्दछ जुन प्रवाहको माध्यमबाट आउँछन् जबकि 'राम्रो' ईमेलहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन् र व्यवसायले कष्ट पाउँछन्। ISP हरू जान्छ र अनुमति, अनुमति, अनुमति को बारे मा। उनीहरूले अनुमतिको बारेमा ख्याल राख्दैनन् ... उनीहरूले केवल कति व्यक्तिले यो रद्दी ईमेल बटन क्लिक गर्ने बारेको चिन्ता गर्दछन्। तिनीहरूसँग काम गर्नुपर्ने त्यो मात्र हो। एक मार्केटरको रूपमा, तपाइँको ग्राहकहरुलाई नराम्रो ईमेल सन्देश राख्नुहोस्, र बाहिर हेर्नुहोस्! तपाइँ अवरुद्ध हुनेछ र एक समय मा एक स्प्यामर लेबल।
ISP हरू वास्तविक स्प्यामसँग लड्न के गरिरहनुपर्दछ
कुनै पनि ईमेल सेवा प्रदायक वा विज्ञापनदाता जसले जिम्मेवार ईमेल पठाउन इच्छा गर्दछ को लागी अप्ट-इन एपीआईहरू प्रदान गर्नुहोस्।
जिम्मेदार मार्केटरहरू दण्डित हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्न अन्य ISP हरूसँग अप्ट-इन डाटा साझेदारी गर्नुहोस्।
ईमेल पठाउन स्प्यामरलाई ISPs प्रयोग गर्नबाट रोक्नुहोस्! के तपाईंलाई थाहा छ? संयुक्त राज्य अमेरिका सबैभन्दा खराब स्प्यामर हो? के तपाईं वास्तवमै मलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी केहि घण्टामा बाल पोर्नोग्राफर भेट्टाउन सक्दछौं तर स्प्यामर्सले वर्षौंसम्म काम गर्न सक्दछ? तपाईं मलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि मोनिटरिंग हार्डवेयरले देख्न सक्दैन र यो यातायातको अविश्वसनीय खण्ड रोक्न सक्दैन?
यदि मैले मानिसहरूलाई मेरो कारमा लागूपदार्थ ढुवानी गर्न अनुमति दिएँ भने, म जेलमा छु। ISP हरू कसरी आए कि स्प्याम यातायात स्प्याम उत्तरदायी छैन?
ईनबक्समा GUARANTEED डेलिभरी हुनका लागि ईमेलहरूका लागि साधन प्रदान गर्नुहोस्। ईमेल अब संचारको माध्यमिक माध्यम होईन। मँ ईनबक्समा क्रेडिट सतर्कता र बैंकि aler सतर्कताहरू पाउँछु। यो असमर्थनीय छ कि यी ईमेलहरू कहिले पनि रद्दी ईमेल फोल्डरमा बन्द हुन्छन्।
यदि यूपीएस, फेडएक्स र युएसपीएसले तपाईंको गोदाममा तपाईंको उत्पादनहरू पठाउन रोक्दछ भने, तपाईंले मुद्दा चलाउनुहुनेछ। कसैलाई इएसपी चाँडै मुद्दा पठाइने छ जुन ईमेलमा डेलिभरी छैन जुन अनुमतिमा आधारित थियो र प्रत्येक नियमको पालना गर्‍यो। यी कम्पनीहरूले यस गडबडीको लागि जवाफदेही हुनु आवश्यक छ उनीहरूले हामीलाई प्रवेश गरे र हामीलाई बाहिर निकाल्न अस्वीकार गरे।
टैग: छुटकाराईमेल वितरणयोग्यताespispरद्दी ईमेलजंक ईमेल फिल्टरिंगस्पाम
भिडियो: ब्लगरहरूको लागि व्हाइटहाट एसईओ
ब्लग पोष्ट नम्बर १००० - टेकपोइन्टबाट प्रत्यक्ष!
रोगी भ्यान डर भेन
नोभेम्बर,, २०१ at 9::2007 बिहान
उत्कृष्ट पोस्ट डग्लस। कुरा फैलाईदेउ!
सहमत प्रकारको ती सबै केरियरबिल्डर ईमेलहरू जुन मेरो मार्गमा आउँदछन्। Argghhh!
नोभेम्बर २०, २००। 9::2007 अपराह्न
यसले मलाई "पूर्वानुमान" को साथ "अनुमति" कसरी बदल्नु पर्दछ भन्ने बारे सिल्वरपप सीईओको लेखको सम्झना दिलाउँछ।
नोभेम्बर,, २०१ at 11::2007 बिहान
राम्रो पोस्ट, यद्यपि मलाई लाग्छ तपाईंको पोइन्ट #4ले फिसलन सडक तल जान्छ। यदि ISPS ले ग्राहकहरु लाई पठाउन को लागी उत्तरदायी हुन्छ, उनीहरु आफ्नो ग्राहकहरु लाई को रूप मा बढी रूढीवादी हुन।
वा, अर्को शब्दहरूमा, तपाईं मेल बमका लागि पोस्टल सेवालाई दोष दिन सक्नुहुन्न। के तपाई डेललाई जेलमा हाल्न चाहानुहुन्छ जब एक हैकरले आफ्नो ल्यापटपको बैंक खातामा प्रयोग गर्न प्रयोग गर्दछ? के एटी एन्ड टी सेलफोन द्वारा आयोजित अपराधको लागि जिम्मेवार मान्नुपर्दछ? शूर्ले छैन। वाहक के वाहकको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्न। प्रेषक हो।
कल्पना गर्नुहोस् कि यदि व्यवसायले हराएको उत्पादकताका लागि ज्ञात स्प्यामरहरू बिल गर्न सक्दछन्। सही, शक्तिशाली (र: लागू) कानूनको साथ, स्पाम विगतको कुरा हुनुपर्दछ।
त्यो उत्कृष्ट पोइन्ट हो, मोडिफू। यो निश्चित रूप मा केहि प्रमाण हुनेछ साबित गर्न को लागी हुनेछ। यदि एक ISP थाह उनीहरू स्प्यान्डि ofको प्रयोगको लागि ब्यान्डविथ बेचिरहेका थिए, उनीहरू उत्तरदायी हुनुपर्छ।
मार्क्स 12, 2011 मा 4: 04 PM
यस ब्ल्गमा व्यक्त व्यक्तिको जस्तो दृष्टिकोण नै ISPs पुलिस इ-मेल मार्केटि :को ठ्याक्कै कारण हो: अप्रमाणित मेल पठाउनेहरू कुनै गलत काम नगरेको विश्वासमा उनीहरूको लोभको कारणले अन्धा हुन्छन्। म तपाईंको लागि समाचार पाएँ, मरुन: स्प्यामको परिभाषामा * केहि पनि छ * अनुमतिका साथ। तपाई जस्तो व्यक्तिले कहिले पनि बुझ्न सक्तैनन्, जे होस्, किन कि आईएसपीहरू तपाईंलाई रोक्न र तपाईंलाई गाई घर फर्केर नआएसम्म कडा परिश्रमको लागि रगत बगाउन केवल खुसी छन्।
मार्क्स 12, 2011 मा 4: 14 PM
राहेल, तपाईंले पूरै पोष्ट छोड्नुपर्दछ। मरोन भाग बाहेक, मेरो कुरा भनेको तपाईको रिसको बारेमा ठ्याक्कै त्यस्तै हो। कृपया ENTREE लेख मार्फत पढ्न समय लिनुहोस्।
मई 22, 2016 मा 3: 25 एएम
उत्कृष्ट महान लेख। अब करीव years बर्ष पछि अवस्था झन डरलाग्दो छ। जस्तो कि मैले यो देखेको छु कि विशाल कर्पोरेट संस्थाहरू जस्तै गुगलले अधिक नियन्त्रण गर्छ हामी के गर्छौं, भन्दछौं वा सोच्दछौं। यो सेन्सरशिपको लागि वेजको सोच धार हो र यो तर्कसंगत सोचलाई रोक्न र हामीलाई सबै प्रोपगान्डा र निगल बनाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो कि ग्लोबल कर्पोरेट मेसिनले हामीलाई खुवाउन चाहन्छ - "सार्वभौम" सरकारहरू आफ्ना प्रशासकहरूको रूपमा प्रयोग गरेर। डरलाग्दा चीजहरू र अझै अविश्वसनीय रूपमा तपाईं सुन्नुहुन्छ यस बारेमा थोरै छलफल भइरहेको। बहुमत - भेडाहरूले भर्खरै यो सबै स्वीकार गर्दछ र केही हदसम्म विश्वको गूगललाई भगवानको रूपमा पूजा गर्दछ। पक्कै राम्रो यस को लाग्नेछ। ती वैध ईमेल मार्केटरहरूको लागि - र जसले उनीहरूलाई सदस्यता लिनुभयो किनकि उनीहरूले उनीहरूको सामग्रीहरू खोज्दछन् (अर्थात् लाभकारी, स्वास्थ्यकर र सशक्त सामग्री) राम्रो भाग्य! तपाईका व्यवसायहरू नष्ट हुन लागेका छन्। यो ग्लोबल एम्फरसहाउ कर्पोरेट मास तपाईंलाई कुनै पनि हिसाबले सशक्त बनाउन चाहँदैन। र यसैले यसले केवल तपाईंको मेलहरू पढ्दैन, यसले तिनीहरूलाई पठाउनबाट रोक्दछ - शब्दको सत्य अर्थमा मेल फ्रड।
सायद अनलाइन व्यवसायहरूले डेलिभर नभएको प्रत्येक ईमेल पहिचान गर्नुपर्दछ र त्यसमा डलर मूल्य राख्नुपर्दछ उदाहरणको लागि email १ प्रति ईमेल हराएको व्यापार आय / मूल्यमा र गैर-डेलिभरीको लागि ग्लोबल क्लास एक्शनमा मुद्दा दायर गर्दछ। यसले उनीहरूलाई सोच्न लगाउँछ! त्यसोभए यदि १०,००,००० वैध ईमेलहरू दैनिक रूपमा विश्वव्यापी रूपमा वितरित हुँदैन भने दावी थपिन्छ?